Chocolate grinder Factory, Chocolate grinder Supplier - igwe LST
Chocolate ginder bụ isi mmepụta akụrụngwa nke chocolate mmepụta akara, ọ na-agụnye Horizontal-Type Ball Mill machine na chocolate / sugar conche igwe, ihe ndị a niile igwe na-eji maka refining nke raw material.Chocolate ginder bụ mmalite nke dum mmepụta akara. , ọ bụ raw material refiner, nke ahụ pụtara na niile chocolate mmepụta usoro mkpa egweri na akụrụngwa, ọ bụ isi akụkụ nke dum mmepụta line.the chocolate grinder gụnyere bọl igwe na conche igwe, niile nkọwa dị ka ndị a:
Gịnị bụ Horizontal-Type Ball Mill igwe?
Igwe ihe igwe kwụ ọtọ-Type Ball Mill bụ ndị otu ndị ọrụ nka sitere na ụlọ ọrụ dị iche iche mepụtara ma na-eji akụrụngwa pụrụ iche nke Chengdu ụlọ ọrụ ndị agha na ndị obodo haziri.N'otu oge ahụ, ọ nakweere uru nke ọtụtụ igwe igwe kwụ ọtọ dị ka German BUHLER, Naichi, na Lehman, yana kwa oyi na mmiri ọkụ na-ekesa n'ime ụlọ na-akpaghị aka.Delta PLC na Schneider ngwa eletriki obere voltaji.Ndị a niile na-eme ka bọlbụ-igwe igwe n'ụzọ zuru ezu izute mba ụwa dị elu. after milled.ball igwe ihe e mma na uru nke ala ume oriri, elu arụpụtaghị ihe, ala mkpọtụ, super ala metal ọdịnaya, mfe ọcha, otu-emetụ ọrụ, etc.N'ụzọ dị otú a, ọ shortened 8-10 ugboro nke oge-egwe ọka na zọpụta 4-6 ugboro nke ike oriri. Na-eduga na nkà na ụzụ elu na mbubata ngwa na mbụ mbukota, ngwá ọrụ na àgwà ngwaahịa na-ekwe nkwa.
Kedu ihe bụ igwe conche chocolate?
Chocolate conche igwe bụ chocolate candy mmepụta isi akụrụngwa na-eji na compound chocolate raw material egweri, ọ na-eji maka refining nke chocolate Efrata / ngwakọta nke koko butter, koko ntụ ntụ, koko uka, chocolate mmanya, granulated sugar, mmiri ara ehi ntụ ntụ wdg.
A na-emepụta ya na mba na ọ bụ ọgbọ ọhụrụ chocolate refining machine.The pụrụ iche imewe na-eme ka ọrụ dị mfe, dị mfe ihicha, obere ike oriri, ezigbo arụmọrụ, mma anya (ihe elu bụ mirror ihe, elu na-ekpuchi ihe nkiri na-acha ọcha. maka nchebe) wdg.Ọ nwere ike melite ederede ikpeazụ na ekpomeekpo nke chocolate, ọ bụ isi ihe mmepụta ihe nke akara mmepụta chocolate.
Gịnị bụ uru nke chocolate grinder?
Igwe igwe igwe bọọlụ: na-ebelata mkpọtụ ahụ, na-echekwa ike, na-eme ka nrụpụta nrụpụta ọrụ ka mma, nkenke nke ọma;
Chocolate conche igwe: mfe ịrụ ọrụ, ọnụ ala.
Kedu ka usoro ọrụ igwe igwe igwe si arụ ọrụ?>
Igwe igwe igwe igwe anyị bụ isi ihe gụnyere:Ball Mill Main Unit,Tank For Mixing,Transit Tank,Syrup Pump, Strong Magnetic Strainer, Water Cooling Machine, Die okpomọkụ igwe na Pipes.generally, anyị na-onwem na 2 tent nke bọọlụ igwe nri isi unit , onye ọ bụla ike bụ 600L, anyị nwekwara ike ahaziri maka ahịa ma ọ bụrụ na ha obere mmepụta ikike, ọ ga-mkpa otu isi unit, igwe ihe bụ 304 igwe anaghị agba nchara.
Igwe igwe igwe igwe na-arụ ọrụ usoro: Ibu ihe akụrụngwa n'ime tank mixer → Na-agbaze na ngwakọta → Ngwakọta bọọlụ mbụ → ụgbọ mmiri na-ebufe → igwe igwe bọọlụ nke abụọ → ike ndọta ndọta → pụta
Lelee vidiyo anyị na usoro ọrụ igwe igwe.
Kedu igwe egweri kacha mma maka ọrụ m?